शुक्रबार सम्पादकीय - राष्ट्रिय सहमतिको सरकार : अर्को तुरुप
सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले मधेसी दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि मौसमसँगै चिसिँदै गएको नेपाली राजनीतिको तापक्रम एकाएक बढेको छ। एमालेको नयाँ प्रस्तावसँगै संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न...
फलानो होटलमा छापा मारेर प्रहरीले यति जोडीलाई आपत्तिजनक हालतमा पक्राउ गर्योआ भन्ने समाचारहरूमा अब कुनै नवीनता छैन। देशका मुख्य शहर र शहरोन्मुख गाउँहरूमा खुलेआम देहसुखको खरिदबिक्री भइरहेको छ। यौनकर्मीहरूले रेडलाइट...
'सेलिब्रिटी होइन, क्रिकेटर हुँ म'
नेपाललाई ट्वान्टी–२० विश्वकपमा पुर्याआएपछि पारस खड्कालाई भ्याइ–नभ्याइ छ। कीर्तिपुरमा गएर अभ्यास गर्नु, सम्मान थाप्नु छँदै छ। विभिन्न ठूला हाउस उनलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। न्युजिल्यान्डमा अर्को महिना हुने...
'आफ्नै कथा' भन्ने सफल
सोमबार २९ चैत्र, २०७२
२०७२ को सुरुवातमै नेपालीले महाभूकम्पको सामना गर्नुप¥यो । देश हल्लियो । धरहरा ढल्यो । घर ढल्यो । हजारौँले ज्यान गुमाए । लाखौँ घरबारविहीन भए । भूकम्पको पीडा बिर्सन नपाउँदै नेपालीले नाकाबन्दी झेल्नुप¥यो । अभावै अभावका बीच गुज्रिएको यो वर्ष नेपालीका…
शुक्रवारबारे विक्रेताका विचार
शंकर ढुंगानामैले पत्रिका डुलाएर बेच्न थालेको २० वर्ष भइसक्यो । ग्राहकको ढोकाढोकामा पुगेर पत्रिका बेच्ने गरेको छु । पहिला पत्रिका पढ्नेहरू धेरै थिए । अहिले अलि कम हुँदै गएका छन् । शुक्रवार पनि सुरुदेखि नै बिक्री गर्दै आइरहेको छु ।…
आइतबार २८ चैत्र, २०७२
नेपाल रिपब्लिक मिडियाको साप्ताहिक प्रकाशन शुक्रवार पाँचौँ वर्ष पूरा गरी छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रवारको वार्षिकोत्सव तथा नयाँ वर्ष २०७३ को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पाठक, लेखक, स्तम्भकार, विज्ञापनदाता, वितरक, विक्रेता तथा शुभचिन्तकलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
धेरै आए, थोरैले भाउ पाए
देशले वर्षको सुरुवातमै महाभूकम्पको सामना गर्नुपर्यो । त्यसलगत्तै नाकाबन्दी। यी दुवैको प्रभाव नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि पर्योष। यद्यपि, यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी फिल्महरू बने र प्रदर्शनमा आए। स्टार अनुहारका कारण हलमा दर्शक आउने वातावरण अझै नबनिसकेपछि थुप्रै निर्माता/निर्देशकले नयाँ अनुहारकै…
२७ चैत्र, २०७२
वैशाख १२ को शक्तिशाली भूकम्पपछि खोज तथा उद्धारमा प्रभावकारी खटाइले अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीले वाहवाही पायो । भग्नावशेषमा पुरिएकाको खोजीमा सघाउन आधुनिक प्रविधिसहित आएका विभिन्न देशका उद्धार टोलीसँगै सशस्त्रझैँ नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसमेत नखटिएको हैन । तर, गोंगबु क्षेत्रको…
'सधैँ पीडितको भूमिकामा म'
आइतबार २१ चैत्र, २०७२
कमलमणि नेपाल १६ वर्षयता रंगमञ्चको दुनियामा संघर्षरत छन्। 'डाक्टर कनक', 'घनचक्कर', 'तारा बाजी लैलै', 'अटलबहादुरको आतंक'लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी नाटकमा उनले अभिनय गरेका छन्। आधा दर्जनभन्दा बढी फिल्ममा पनि काम गरिसकेका छन्। तर, हास्य टेलिसिरियल 'भद्रगोल'को 'खुपीका बाउ' चरित्रबाट बढी…
कुन ध्येयले हुन्छ विमान अपहरण ?
बिहीबार १८ चैत्र, २०७२
अन्तर्राष्ट्रिय उडानसेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन थालेके धेरै समय बित्न नपाउँदै विमान अपहरण हुन थालेको थियो । तर, त्यतिबेला विमान अपहरणकारीहरूले राजनीतिकभन्दा पनि व्यक्तिगत आकांक्षा पूर्तिका लागि हाइज्याक गर्ने गर्थे । कहिलेकाहीँ आपराधिक मनोवृत्तिको वशमा परेर हाइज्याक गर्ने पनि भेटिन्थे…
'स्वामी र माँ'हरुको कर्मसाधना र ध्यान
१३ चैत्र, २०७२
काठमाडौं सतुंगल चोकदेखि करिब डेढ किलोमिटरभित्र पर्छ धौलागिरी आवास क्षेत्र। त्यही क्षेत्रमा अवस्थित छ पथिक फाउन्डेसन। फाउन्डेसनभित्र पथिक ध्यान केन्द्र, ज्ञाननिकेतन त्रिभुजीय शिक्षा स्कुल, सिद्धार्थ सभागार ध्यान केन्द्र र पथिक आवास, इन्द्रप्रष्ट ओशो भवन र गाई गोठमा दुई दर्जन गाईहरु।
साइनबोर्ड एउटा धन्दा अर्कै
बिहीबार ११ चैत्र, २०७२
फलानो मेनपावर कम्पनी ! फलानो ब्युटिपार्लर ! फलानो खाजापसल ! साइनबोर्डमा यस्तो लेखिएको हुन्छ । तर, लेखिएअनुसार नै काम हुन्छ भन्न कहाँ सकिन्छ र ? राजधानीमा एकथरी पेशा वा व्यवसायको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर अर्कै थरी धन्दा गर्नेहरूको बिगबिगी छ । खाजापसलमा…